Dhimma Abbayyaa irratti dowwannaa fi affeerraa jaarsummaa - BBC News Afaan Oromoo
Dhimma Abbayyaa irratti dowwannaa fi affeerraa jaarsummaa
29 Amajjii 2018
Goodayyaa suuraa Lagni Abbayyaa bishaan %80 ta'u rooba Itoophiyaa keessatti rooburraa argata
Ministirri Muummee Masirii Saameeh Shikur dhiheenya kana Itoophiyaatti argamuun, mariin adda cite akka itti fufuuf Masiriin yaada furmaataa haarawa qabattee dhuftee jirti jechuun ibsanii turan.
Yaada mata duree marii ta'ee ture kanas Baankiin Adduunyaa kan Masiriin ''bilisa'' jette jidduu galuun akka araarsuuf gaafattee jirti.
Haala kanatti aansuunis dowwannaa hojii Ministirri Muummichaa Obbo Haayila Maariyaam Kaayirootti taasisaniin, Itoophiyaan gocha Masirii hubu kamiiyyuu akka hin raawwanne Pireezidaanti Al SIISII'f mirkaneessaniiru.
Ijaarsi hidhichaas parsantaa 65 ol kan gahee yoo ta'u, mariin biyyoota sadan jiduutti eegalamee fiixaan bahiinsa dhabuunsaafi hidhichi gara xumuraatti adeemunsaa Masirii kan cinqe akka fakkaatu qorattoonni bishaanii ni ibsu.
Maaliif Baankii Addunyaa?
Baankii addunyaa hojiiwwan misoomaa Itoophiyaan naannawa Abbayyaatti gaggeessitu akka hindeeggarre motummaan irra deddeebiin ibsa. Akkasumas biyyattiin hojiiwwan hidhichaafi isaan walqabateef deegarsa akka hinarganneef, lammiileen Masirii baankicha keessa hojatan dhiibbaa taasisuu isaanii qondaaltoonni Itoophiyaa dubbachaa turaniiru.
Sababii kanaaf ture, motummaan Itoophiyaa hidha ardii afriikaatti isa guddaa ta'ee kana baasii mataa isaatiin ijaaruuf kan karoorfate.
Qorataa siyaasa bishaan Abbayyaa kan ta'an Doktor Aanaa Iliinaa Kaasiki'oo, waa'ee jaarsummaa baankii addunyaa dhimma abbayyaarratti ilaalchisuun BBC'tti akka himanitti, ''Akka qajeelfama waliigalaatti sanada waliigaltee Hidha guddichaa irratti taa'ee, hirmaannaan qaama sadaffaan taasisuu qabu kamiyyuu qaamoolee maricha irratti hirmaatan hundaan kan irratti walii galame ta'uu qabaata,'' jedhu.
Akkasumas waqxii yadni kun itti kaafame irratti gaaffii kaasu. "Mariiwwan waggoota torban darban keessa biyyoonni sadan taasisan bu'a qabeessa yoo ture, maaliif gara hojiitti hiikuun isaan rakkisee?'' jedhu.
Akka qo'ataa dippilomaasii bishaan abbayyaa kan gara biraa Obbo Wandasan Michaagoo Sayidiitti, "Baankiin addunyaa pirojaktii yaa'aa abbayyaa Masiriin hin raggaasisiin kamiifuu deeggarsa hintaasisuu.
Barmaatileen loogii sirrii hinturree kun amma geedarameera. Sababiin isaas Itoophiyaan dhaabbata kans ta'ee maallaqa irrattis fedhii hinqabdu."
Akka qo'ataa saayinsii siyaasaa yunivarsitii biyya Siwiidiin kanaatti, "baankiin addunyaa kana booda dhimma abbayyaa irratti hirmaannaa guddaa taasisuu hin danda'u.''
Goodayyaa suuraa Hidhaan Guddichi Itoophiyaa annisaa geegaa waatii torbaa ol maddisiisa jedhamee eegama
Sudaaniin achi fageessuuf
Mariin kana dura hidhicharratti gaggeefamaa tures Itoophiyaa, Sudaan fi Masirii jidduutti ture. Waliigalteen waliinis kan taasisfame biyyootuma sadan jidduutti ture. Garuu ejjannoon Sudaan qabdu kan Masiriittiin faallaa waan ta'eef, sababii kanaan biyyoota lamaa jidduutti walididdaan umameera. Yaada marii dhiheenya Masiriin dhiyeessite keessatti Suudaan akka hinhirmaanneef gaafachuun ishee dhagahameera.
Dr Anaan kana ilaalchisuun "mariin dhimma hidhichaarratti gaggeefamaa tureefi kan boodas gaggeefamu hundi biyyoota sadeen kan hirmaachisu ta'u qabaata. Kamiiyyuu looguun hindanda'amu. Mariin abbayyaarratti gaggeefamu kamiyyuu yeroon inni biyyoota lamaa jidduutti qofa itti ta'u amma raawwateera," jedhu.
Akka Obbo Wandasanitti ammoo, "Gaaffiin Masrii kuni tarsiimoon kan guutamedha. Sababiin isaas yaalichi kan Sudaan adeemsicha keessaa foo'uun qaama biraatiin bakka buusuuf karoorfateedha,'' jedhu.
Dhimma affeeraa Masiriin baankii addunyaatiif taasisuus, mariirraa gara akka araaraaf hojachaa jirtu dubbatama.
Dhubbi himaan Minisiteera haajaa alaa Itoophiyaa Obboo Mallas Alam BBC'tti akka himanitti, motummaan Itoophiyaa mariin hidhicharratti gaggeefamu kamiiyyuu waliigaltee duraan dhimmicharra irragahameen ala akka adeemsifamuuf hin hayyamtu.
Dhimma baankii addunyaa ilaalatunis Itoophiyaan akka hinfudhannee ibsanii, "kuni dhimma biyyooti sadan qofaa murteessan ta'aa,'' jedhaniiru. Dhimmicharratti Sudaaniin looquun gonkumaa fudhatama hinqabaatus jedhaniiru.
Dowwannaan ministira Muummee Itoophiyaa Masiriitti taasisanii turanis marii biyyooti sadan dhimma hidhichaarratti adda kutamee ture itti fufsiisuuf bu'aa olaanaa qabaachu isaa Obbo Mallas ni dubbatu.
Dowwanicha ilaalchisuun Dr Anaan "haala gutamuu hidhichaafi waa'ee gara fuula duraa irratti marii taasisuu jechuun, biyyooti sadan attamiin gara dantaa dinagdeetti akka geeddaran jechuudha,'' jedhaniiru.
Obbo Wandasan ammo, dowwanichi rakkina naannawa galaana Diimaatti umamee hirisuuf yoo ta'e malee bu'aa hiika qabu akka irraa hineegne dubbatu.
Haa ta'u malee dubbi himaan Ministirichaa garuu dowwanichaan waliigalteewwan gaarii irra gahamusaatiifi Masiriin Itoophiyaa keessatti Zoonii Industirii akka ijaartuuf motummaan lafaafi misoomawwan bu'uuraa barbaachisan akka qopheessuuf waliigalteerra gahamusaa eeruun bu'aa qabessuummaa dowwanichaa hubachisuu.
Gaaffii gama Masiriitiin baankichaaf dhiyaate ilaalchisee Waajjira baankichaa Finfinneetti argamu gaafannee deebii karaa imeelitiin nuuf kennaniin, "biyyoon sadan waliin akka baankichi deegarsa tekinikaa taasisuuf ifatti osoo hingaafatiin dura qondaaltoonni Masirii dhiyaachuun fedhii Itoophiyaafi Suudaan eegaa jiraachu isaanii ibsaniiru.
Baankii addunyaa dhimma hidha guddichaa keessatti hirmaannaa omaa hinqabuus,'' jechuun deebii nuuf kenaniiru.
'Qabsoo nagaatti deebi'uuf mootummaan mallattoo nagaa agarsiisuu qaba'
Daa'imni waggaa saddeetiin yunivarsiitii gale barnootasaa addaan kute
Moqdishuutti hidhattoonni hoteela qabatan shan ajjeefaman
Lola qawwee lubbuu namoota ja'a galafaate
Boo'uun faayidaamoo miidhaa qaba?
Ameerikaan barattoonni aviyeeshinii Sa’uudii akka hin balaliisne dhorkite
Aljeeriyaan ministiroota mummee duraanii lama hiite
'Ani miidhagina uumamaatiin boonuu nan jajjabeessa'